Muuri News Network » Maxaadan Ogeyn oo looga hadlay shir RW Kheyre looga yeeray oo ka dhacay Xarunta Xalane?
Maxaadan Ogeyn oo looga hadlay shir RW Kheyre looga yeeray oo ka dhacay Xarunta Xalane?
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta shir guddoomiyey kulan looga hadlayay Amniga Qaranka oo lagu gor-feynayay xaaladda amaan ee dalka, Xoojinta xiliga kala guurka iyo Wadashaqeynta hay’addaha amniga iyo Beesha Caalamka.
Shirkan oo ka dhacay xarunta Xalane diiradda lagu saarayay qorshaha diyaarinta ciidankii la wareegi lahaa amniga dalka , kuwaaso oo badeli doona ciidanka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee Midowga Afrika, dawladda Soomaaliyeedna ka caawiyay sidii ay dib ugu soo ceshen lahayd amaankeeda. Waxaana la isku af-gartay in howshan bilowga ah aysan noqon mid fadhiida.